Ukuba nezingane ezimbalwa, phakathi kwezinyathelo ezisebenza kakhulu zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siphila ezweni eligcwele ngokweqile. Njengamanje singabantu abangaphezu kwezigidigidi eziyi-7 emhlabeni wonke, futhi siyabala. Ngamunye wethu, kusukela ekuzalweni kuze kube sekufeni, ufuna ukubhekana nezidingo zethu, into enengqondo ngokuphelele, kepha kwenzekani lapho sisebenzisa kakhulu imithombo yemvelo futhi singanakekeli uMhlaba?
Ukuguquka kwesimo sezulu, kuyilapho kuyinto engokwemvelo, siyenza ibe yimbi nakakhulu. Ukugawulwa kwamahlathi, ukusetshenziswa kwezinto zokubasa ezimbiwa phansi, ukungcoliswa kwezilwandle, imifula nomoya esiwuphefumulayo, kwenza umoya ungazinzile. Uma sifuna ukukuyeka, kufanele sazi ukuthi yiziphi izinyathelo ezisebenza kahle kakhulu futhi yilokho kanye uphenye iNyuvesi yaseLund (eSweden). Phakathi kwazo kubalwa ukuba nezingane ezimbalwa, noma kungeyona yodwa.
Abaphenyi baqhamuke nefomula yomuntu siqu engasindisa ubuntu: ukuba nezingane ezimbalwa, ukugwema ukuhamba ngendiza, ukungasebenzisi imoto nokuba ngumuntu odla imifino kuphela. Ngalezi zinyathelo, amazwe abizwa nge- "First World" anganciphisa ukukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa okushisayo, ngokususelwa ekuhlaziyweni okuphelele kwemibhalo nemibiko ehlukene kahulumeni.
Ngakho-ke, bakwazile ukuthola ukuthi ukugqoka i- Ukudla imifino kungasivumela ukuthi songe Amathani we-0,8 isikhutha ngonyaka; ungayisebenzisi imoto 2,4 amathani, futhi ungasebenzisi indiza kakhulu amathani ayi-1,6 we-CO2 uhambo ngalunye. Kepha into egqame kakhulu ukungabi nezingane eziningi: Ngalesi silinganiso, ukukhishwa kwe-CO2 kuzokwehla ngo 58,6 amathani ngonyaka ngokwesilinganiso. Lesi yisibalo esibala ukukhishwa kwesikhathi esizayo kwendodana nenzalo yayo.
Lezi yizinyathelo ongase ungazithandi kakhulu, kodwa umbhali osebenza naye ocwaningweni uKimbery Nicholas uthe “asikwazi ukungawunaki umphumela wesimo sezulu indlela yethu yokuphila ewenza ngayo ngempela. Ngokwami, ngikuthole kukuhle kakhulu ukwenza eziningi zalezi zinguquko. Yabantu abasha abasetha amaphethini wempilo, njengoba manje sebazi ukuthi yiziphi izinketho ezinomthelela omkhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuba nezingane ezimbalwa, phakathi kwezinyathelo ezisebenza kakhulu zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu